China Boiler firaka fantsom-boaloboka firavaka vy mirindra fantsom-pandrosoana ary mpamatsy | Hongyi
Panarana roduct ara-nofo Malagasy famaritana Application
Pipe vy vy 12Cr1MoVG
JISG3458-88 ∮8-1240 * 1-200 mari-pana avo, hafanana ambany ary fanoherana ny harafesina amin'ny indostrian'ny bozy elektrika petrochemical
Sodina ambany mari-pana 16MnDG, 10MnDG, 09DG
ASTM A333 ∮8-1240 * 1-200 45 ~ -195 fantsona faneriterena mari-pana ambany sy fantsom-panafanana hafanana ambany
Tube fantsom-bozy avo lenta 20G
DIN17175-79 ∮8-1240 * 1-200 fantsona hafanana, fanangonana boaty ary fantsom-pamokarana fantsom-boalavo mahery
h Sodina paompy misy tsindry mafy
16Mn GB6479-2000 ∮8-1240 * 1-200 fitaovana simika sy fantsom-panafody misy hafanana miasa -40--400 sy tsindry miasa amin'ny 10-32mpa
Sodina tsindry ambany-ambany
16Mn<Q345A.B.C.D.E> GB3087-2008 ∮8-1240 * 1-200 fanaovana boiler tsindry ambany sy salantsalany ary bozy locomotive
Fantsom-pandefasana 10 #, 20 #
ASTM A53 ∮8-1240 * 1-200 Tube fantsona vy tsy misy fangarony azo ampitaina amin'ny tsiranoka
Fantsona ankapobeny rafitra 10 #, 20 #, 45 #, 27SiMn
ASTM A53 ∮8-1240 * 1-200 Azo ampiharina amin'ny firafitra ankapobeny, ny milina fanohanan'ny injeniera, sns
Ny fantsom-boaloboka dia karazana fantsom-by tsy misy vy. Ny fantsom-piraika dia azo zaraina ho fantsona tsy misy fangarony ho an'ny fampiasana struktural sy fantsom-piraikitra mahazaka hafanana mahery setra. Tsy mitovy amin'ny fenitry ny famokarana sy ny indostrian'ny fantsom-boaloboka, ny toetra mekanika an'ireo fantsona ireo dia novaina tamin'ny fampidirana an-trano sy ny fifehezana. Tanteraho ny fepetra fanodinana takiana. Ny fahombiazany dia avo kokoa noho ny an'ny fantsom-by vy tsy misy fangarony, ny firafitry ny simika amin'ny fantsom-batana dia misy Cr bebe kokoa, fanoherana ny hafanana avo, fanoherana ny hafanana ambany, fanoherana ny harafesina. Tsy misy firafitry ny firaka na firafitra firaka vitsivitsy amin'ny fantsom-pitrandrahana karbonika ankapobeny. Ny antony mahatonga ny fantsom-boaloboka ampiasaina betsaka amin'ny solika, aerospace, indostrian'ny simika, herinaratra, boiler, indostrian'ny tafika ary indostria hafa dia ny fiovan'ny mekanika ny fantsom-boaloboka ary manitsy tsara.
Ny fantsom-pitrandrahana dia ampiasaina indrindra amin'ny fantsom-panafody fantsom-bozaka ambany sy salantsalany (ny tsindry miasa amin'ny ankapobeny tsy mihoatra ny 5.88mpa, ny mari-pana miasa dia ambanin'ny 450 ℃); Ampiasaina amin'ny fanamafisana ny fantsom-panafody, ny mpahay toekarena, ny superheater, ny fantsom-panafody ary ny fantsom-panafody ho an'ny indostrian'ny petrochemical an'ny vovo avo lenta (ny tsindry miasa amin'ny ankapobeny dia mihoatra ny 9.8mpa ary ny maripana miasa dia eo anelanelan'ny 450 ℃ ~ 650 ℃).
Ny fantsom-by vy dia ampiasaina amin'ny foibe famokarana herinaratra, zavamaniry nokleary, boiler tosika avo lenta, superheater amin'ny hafanana avo lenta, mpampiofana hafa ary fantsona avo lenta sy hafanana avo lenta ary fitaovana, vita amin'ny vy karbaona avo lenta, vy vita amin'ny firafitra ary hafanana tsy misy fangarony vy mahatohitra, aorian'ny fihodinana mafana (fitrandrahana, fanitarana) na fihodinana mangatsiaka (sary).
Izy io dia azo averina 100%, mifanaraka amin'ny paikadim-pirenena momba ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fiarovana ny angovo ary ny fiarovana ny enti-manana. Ny politikam-pirenena dia mamporisika ny fanitarana ny sehatry ny fampiharana ny fantsom-boaloboka avo lenta. Ao Shina, ny ampahany amin'ny fanjifana fantsom-boaloboka amin'ny totalin'ny vy dia antsasaky ny an'ny firenena mandroso ihany. Ny fanitarana ny sehatry ny fantsom-pitrandrahana alika dia manome toerana malalaka kokoa ho an'ny fampandrosoana ny indostria. Araka ny fikarohana nataon'ny vondrona manam-pahaizana momba ny sampana fantsom-pitrandrahana alimina an'ny Fikambanam-barotra manokana ao Shina, ny fangatahana fantsom-boaloboka avo lenta ao Shina dia hitombo 10- 12% isan-taona amin'ny ho avy.
Previous: Tavoahangy vita amin'ny vy mangatsiaka avo lenta
Manaraka: Lisitry ny fananganana vy vita amin'ny vy mihodina mafana